CUNCUNKA SHINNIDA "BIPINO": TILMAAMAHA ISTICMAALKA - BEEKEEPING
Ka shaqeynta shinni ka soo sax ah waa dhacdo lagama maarmaanka u ah dhammaan beero-wadaagga. Mararka qaar nolosha qoysaska oo dhan bees waxay ku xiran tahay, ka dibna daroogada "Bipin" waxay u timaadaa caawin, oo ay ku jiraan amitraz.
"Bipin": Faahfaahinta, halabuurka iyo foomka sii deynta daroogada
Amitraz, oo ah qaybta ugu weyn ee firfircoon ee "Bipin", waa daawo loogu talagalay si loola dagaallamo shinni. Walaxda firfircooni waa dareer cad ama wax yar oo hurdi ah oo leh ur xooggan. Waxaad ku iibsataa dhalooyinka quraarada ee hal ama badh mile.
Qalabka Faragelinta iyo calaamadaha loo isticmaalo
Maaddada firfircoon ee amitraz waxay si firfircoon ula dagaallantaa caarada Varroa Jacobsoni. Daroogadu ma joojinayso hawlaha muhiimka ah ee qoyska cayayaanka. LD50 ee daroogadu waa 10 micrograms halkii cayayaan. Calaamad u ah isticmaalka daroogadu waa shubka jirrada.
Waa muhiim! Qalabka wuxuu bilaabmaa inuu ku shaqeeyo seddex saacadood gudahood kaddib marka la buufiyo.
"Bipin" waxay wax ku ool u tahay la dagaallanka cuntooyinka Varroa, sidoo kale wax saameyn ah kuma yeeshaan beeska. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa heerkulka hooseeya. Qofka, daawadu maaha mid khatar ah, laakiin waa in la eego dhammaan heerarka amniga.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay ee jirroosis loo aqoonsado sannadkii 1964-kii Ruushka, tan iyo markaasna waxa uu noqday cudurka ugu caansan ee cayayaanka.
Tilmaamaha: qiyaasta iyo habka loo isticmaalo
Isticmaal daroogada qaab qaab emulsion ah. Waa inaad ku qastaa 0.5 ml oo ah "Bipin" oo leh hal litir oo biyo ah isla markaana isticmaal halbeeggan hal maalin. Marka laga hadlayo goorta la habeynayo beeska "Bipin", khubarada ayaa isku raacay in ay ka fiicantahay inaad tan sameyso xilliga dayrta, marka aanay mar dambe cidla ahayn oo aan lahayn dhaxan jidka.
Ma taqaanaa? Honey soo saaray cayayaanka lagu daaweeyo Bipin waa la cuni karo.
Qoysaska waa in laguula dhaqmaa wakiil iyaga oo ka dhigaya emulsion cayayaanka. Hal darbi, waa inaad isticmaashaa 10 ml oo ah xalka shaqada. Markaad isticmaasho "Bipin" waa in ay si adag u hoggaansamaan tilmaamaha isticmaalka.
Waa muhiim! Codso daawada waa inay noqotaa laba jeer: markii ugu horeysay, marka malab la ururiyey oo kaliya, iyo mar labaad - ka hor inta jiilaalka, in dhacdo in on bees leh indhaha qaawan arki kartaa shillinta.
Waa mamnuuc in la xakameeyo qoysaska kuwaas oo xoogga ka yar shan waddooyin.
Sidoo kale akhri faa'iidooyinka iyo waxyeellada kaabaha, lime, malab kufaha.
Tilmaamo gaar ah
Ka hor inta aan la daaweyn shinnida Bipin, badbaadada iyo waxtarkeeda waa in lagu tijaabiyo qoysaska dhowrka ah, iyagoo eegaya xaaladooda maalmaha soo socda. Xaddiga xad dhaafka ah ayaa sidoo kale khatar ah.
Xaaladaha khatarta ah iyo xaaladaha kaydinta
Ku kaydi meel qallalan, madow iyo qabow, ka ilaali heerkulka ka hooseeya 0 ° C iyo in ka badan 30 ° C. Nolosha sheyga - 3 sano.
Waxaa muhiim ah in aan dib loo dhigin daaweynta cayayaanka ka jirta jirrada, si loo ilaaliyo caafimaadkooda. Ku mahadnaqidda dadaalkaagu wuxuu noqon doonaa mid macaan leh iyo midab caafimaad leh.